Shirweyne looga hadlayo dib u habeyn lagu sameeyo Garsoorka oo Maanta ka Furmaha Magaalada Muqdisho | Salaan Media
Home Wararka Shirweyne looga hadlayo dib u habeyn lagu sameeyo Garsoorka oo Maanta ka...
Isniin, 01, 2013 (SM) — Shirweyne qabashadiisa uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud bishii Feberaayo ee sannadkan oo looga tashanayo sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa garsoorka dalka ayaa manta ka furmaya Muqdisho.
Kulankan oo socon doona muddo shan maalmood ah ayaa waxaa looga hadli doonaa sida ugu habboon ee garsoorka dalka wax ka bedel loogu sameyn lahaa iyo sidii sharciyada dalka loo waafajin lahaa dastuurka iyo Diinta.
Sharci-yaqaannno, aqoonyahanno, culummaa’uddiin, oday dhaqameedyo iyo qeybo kale oo bulshada ka tirsan ayaa ka qaybgalaya shirka, iyadoo inta uu socdo la dhageysan doono fikirka ay bixiyaan qaybaha shirka ka qaybgalaya.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh ayaa lagu wadaa inuu shirka furo isagoo saakay kasoo laabtay safar uu toddobaadkii ugu kicitimay dibadda oo uu kusoo maray dalalka Qatar iyo Imaaraadka Carabta.
“Garsoorku waa halka keliya ee laga hagi karo sharciga dalka, marka haddii uusan garsoorku u shaqeyn sidii loo baahnaa, ma dhacayso in cadaalad la helo,” ayuu madaxweynaha Soomaaliya horay u sheegay isagoo xusay inay wadaan qorshayaal ay dib ugu habeynayaan garsoorka.
Fikradaha kasoo baxa shirka ayaa waxaa lagu wadaa in loo adeegsado dib u habeyn lagu sameeyo garsoorka, sidii lagu sheegay warsaxaafadeed lagu iclaamiyay qabsoomidda shirkan oo Sabtidii kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya.
Ammaanka Hoteelka Jaziira oo uu shirku ka dhacayo ayaa aad loo adkeeyay iyadoo waddooyinka hoteelkaas gala la dhigay ciidammo isugu jira AMSIOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya, waxaana shirkan furmitaankiisa uu kusoo beegmayaa ra’iisul wasaaraha oo safar ugu maqan gobolka Gedo.